Plex.Earth, ezigbo ihe atụ nke ịbanye na ahịa Hispanic - Geofumadas
Plex.Earth, ezigbo ihe atụ nke ịbanye na ahịa Hispanic
Jenụwarị, 2012 Google Earth / Maps, innovations
Naanị taa ka ewepụtara ngwaa PlexScape peeji, nke ewezuga nsụgharị Greek mbụ ya na Bekee na French.
O yiri ka anyị bụ mmegharị dị egwu, nke anyị hụrụ ihe na-egosi site na mbụ, ebe ọ bụ na Plex.Earth n'ime ọtụtụ asụsụ 10 ya tinyelarịrị Spanish na nsụgharị 2.0.
Ọfọn, ọ bụghị site na uto ọ bụ asụsụ nke abụọ a kacha eji eme ihe na Google. Mana nke a bụkwa n'ihi ọnọdụ pụtara ìhè na mpaghara a, nke na-anọchite anya ihe na-erughị nde mmadụ 500, n'agbanyeghị na e kesara ụwa niile, ha na-etinye uche na kọntinent America na mpaghara Iberian Peninsula. Ngalaba nke na-eto kwa ụbọchị dị ka ahịa, ebe obere obere ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara ghọtara ịghọta mkpa ọ dị iji ngwanrọ na iwu na gọọmentị ịme iwu iji tinye ego na ngalaba teknụzụ na-adigide.
Eziokwu a ma ama dịkwa oke ọnụ ahịa, ha jiri ntụgharị mmadụ mee ihe, nke na-enye nkọwa doro anya zuru oke maka ọdịnaya ahụ, na-emegide ihe Google Translate na-arụpụta na mbọ ya kachasị mma iji ghọta ihe asụsụ anyị chọrọ.
Geofumadas na-enyocha Plex.Earth maka afọ abụọ ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okike ya. Enwere m ike iche n'echiche onye kere ya (Injinia Obodo), na-ajụ onwe ya ajụjụ atọ nke ọtụtụ gafere n'etiti:
Ọ ga - ekwe omume ịnweta Google Earth na AutoCAD, iji nweta ihe ngosi satịlaịtị na ọrụ WMS a na-eje ebe ahụ?
Ma ọ ga - ekwe omume ịse na Google Earth, inwe nkenke nke AutoCAD na - enye, na ịchekwa data na dwg?
Nke a nwere ike ịrụ ọrụ na ụdị AutoCAD ọ bụla?
Anyị maara na isiokwu ahụ nwere mmasị n'ozuzu n'akụkụ ọ bụla nke ụwa, mana ọnọdụ Latin America anyị bụ akụkụ nwere mmasị karịa iji Google Earth. Ọ bụrụ na ị bi na Netherlands, na ịchọrọ onyonyo dijitalụ, naanị ị jikọọ na ọrụ wms na-enye ya n'efu, ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ orthophoto ị na-aga naanị na Cadastral Institute ma ị nweta ya na ọnụahịa kwesịrị ekwesị ma ọ bụ n'efu n'okpuru nkwekọrịta nke Exchange nke Nnukwu Map.
Mana ọ bụrụ na ibi na Latin America ... (ewezuga ole na ole), akwụkwọ ọdịnala nke National Land Registry were ego ọha anaghị enweta, ọ bụrụ na ịnweghị akwụkwọ nke Onye isi ala binyere aka, ọ bụ na ha enweghịzi ya ma ọ bụ na ị ga-akwụ ya ụgwọ. ka ukochukwu ahụ resị gị ya dị ala. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ha na-ere ya, mana ọnụahịa dị na ala nke ndepụta ahụ ... nke ị na-enwetaghị mgbe ị hụrụ ọnụahịa ha na-arịọ maka maapụ cadastral n'ụdị edepụtara.
Yabụ Google Earth, ya na njedebe ya, na-adọrọ mmasị. Site na njirimara dị mma nke mgbanwe mgbanwe nyocha, ọ mechara bụrụ ihe ngwọta maka adịghị ike ụlọ ọrụ na aghụghọ iji nweta akụ na-adịghị adị.
Ọbụlagodi na nyocha ndị a anyị ekwuola gbasara ha:
Kedu ihe Plex.Earth 2.5 ga-eweta?
Obi dị anyị ụtọ ịhụ mgbanwe ndị a tụrụ aro, gosipụtara na nke kachasị ọhụrụ, ha hụkwara na ha hụrụ Spanish ka ọ ga-ekwe omume. N'ịgwa otu n'ime ndị okike ya okwu, ọ kpọtụrụ uche m na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ahịa ya ugbu a na-asụ Spanish.
Maka akụkụ anyị, anyị na-anabata gị ma nwee olileanya na agbasala ngwaahịa ngwa ahịa a, ikekwe njikọ kacha mma n'etiti Google Earth na AutoCAD.
Previous Post«Previous Tintin, laghachi na nwata
Next Post Mee ka nchekwa nchekwa nke ụlọ ọrụ nke CivilCAD rụọ ọrụNext »